Real Madrid Oo Soo Bandhigtay David Alaba Una Dhiibtay Numberka Uu Xiran Jiray Daaficii..
Home Wararka Ciyaaraha Real Madrid oo soo bandhigtay David Alaba una dhiibtay Numberka uu Xiran...
Real Madrid ayaa soo bandhigtay daafaceeda cusub ee David Alaba ka dib markii uu daafaca ka gudbay tijaabada caafimaadka, iyadoo ninka reer Austria loo gacan galiyay maaliyada Sergio Ramos ee numberka afaraad.
Los Blancos ayaa ku dhawaaqday inay si xor ah kula soo saxiixatay Alaba bishii May iyadoo qandaraaskiisa Bayern Munich uu dhacayo, ka dib markii ay ka waayeen kabtankoodii halyeeyga reer Spain kooxda PSG, imaanshihiisa ayaa u noqon doonta muhiim.
29 jirkaan ayaa la sawiray isagoo tijaabada caafimaadka u maraya waxana kadib lagu soo bandhigay xaruurta Real Madrid.
madaxweynaha Florentino Perez iyo maamulka kale ee kooxda ayaana ku soo dhaweeyay xaruunta isagoo sheegay in uu ku hanweenyahay xirashada maaliyada cad
‘Waad salaaman tihiin dhammaantiin, aad ayaad ugu mahadsan tihiin soo dhaweynta diiran ee aad uu saneeseeb. Waa maalin ku weyn xirfadayda, aad ayaan ugu faraxsanahay.
Previous articleParis Saint-Germain oo sare u qaaday qiimaha ay ku dooneyso Xidigaha Paul Pogba
Next articleCristiano Ronaldo oo Shaaciyay go’ankiisa kooxda Juventus